Xog la helay: Xasan Culusoow oo Kismaayo ka xaraashay Qatar, Turky iyo Ingiriis – make music movie Edition: International | Video
Published On: 28 May 2013 11:47 pm Wararka | By taleeh Xog la helay: Xasan Culusoow oo Kismaayo ka xaraashay Qatar, Turky iyo Ingiriis
Tan iyo markii loo cumaamaday xilka Madaxweynanaimada Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya Mudane Xasan Culusoow waxa uu xusul duub ugu jirey siduu ukala dhantaali lahaa umadda Soomaaliyeed ee reer Jubaland. Dagaalka uu Xasan Culusoow ku hayo Jubooyinku wuxuu bilaabmay isagoon Dawlad soo dhisin oo aan weli magacaabin Raysalwazaare.
1) Muddo yar kaddib doorashadiisii ayaa ciidammadii degaanka Jubaland iyo kuwii AMISOM ee Kenya waxay kaabiga usoo fadhiisteen magaalada Kismaayo, hadalkiisii ugu horreeyey ee madaxweynaha ee dadka wax ufiirsadaa ka fajiciyey wuxuu ahaa markuu yidhi “Ciidanku yaanu gelin Kismaayo ee aniga ha la’iga warsugo! 2) Tallaabadiisii labaad waxay ahayd hadalkiisii canka noqday ee uu Beledweyne kaga khudbadeeyey ee ahaa “Reer Beledweyne cid laydiin soo magacaabayaa oo idin xukumaysaa ma jirto idinkaa xaq uleh inaad maamulkiinna dhisataan. Reer kismaayona dawladdaa maamul usoo magacaabaysa.
Wixii intaa ka danbeeyeyna Kismaayo iyo Jubalanad waxay noqdeen wax uu ku tasbiixsado. Haddaba Taleexmedia ayaa dabagal kusameeyey sababaha badan ee is dulsaaran ee Madaxweynihii Qaranka loo doortay ku xanbaaray inuu xilkii qaranka intuu meel iska dhigo KIsmaayo ku khafiifo.
1) Sababta koowaad waa mid uu kala siman yahay reerka uu ka dhashay oo ah damac aan indho lahayn oo weliba qaawan oo ay dhulboob kudoonayaan, gobollana imminka ay uguba habsadeen sida Shabeellada Hoose iyo Caasimaddii umadda Soomaaliyeed ee Xamar oo ay hantidii ummadda Soomaaliyeed weli kuhaystaan.
2) Sababta labaad waa damac ah mid dhaqaale iyo mid xukun sii adkaysi ah. Waxaa Taleexmedia soo ogaatay caddaynteediina ay dhowaan soo bandhigaysaa inuu jiro heshiis ay wada galeen Dawladda Qatar iyo Madaxweyne Culusoow oo dhiagaya “In Qandaraas dheer dawladda Qatar lagu siiyo inay dib udhis kusamayso dekedda Kismaayo iyo gegida diyaaradaha oo ay muddo dheer maamusho Qatar”. Sidoo kale waxaa heshiiskaas weheliya in dawladda Qatar lagu wareejiyo Dhulbeereedka Jubbooyinka (Land for farming) si ay wax uga beertaan muddo boqol sano ah (Long term lease) dhulka qaarna lagaba iibiyo oo lagu wareejiyo (Land grab) . Taa beddelkeedana Xasan Culusoow xukunka lagu hayo dhaqaalena lagu harqiyo.
3) Dawladda Turkiga iyana waxaa jira inuu heshiis kula galay in Dhulbeereed lagu wareejiyo si ay umaalgashadaan Dhulkaa (Land grab). Arrintan dhulbeereedka lagu wareejinayo waddamada qaniga ahi waa arrin imminka adduunka aad uga socota khatarna ku ah dadka danyarta ah ee waddamada soo koraya (Halkan Fiiri labadan lifaaq eek ala duwan Land Garb1 iyo land-grab-2 ) – Waxaa kaloo jira in ay intaa dheertahay shirkadda Turkiga ah ee la yidhaahdo Genel Energy (ee uu madaxda ka yahay ninka udhashay Ingiriiska ee layidhaahdo Tony Hayward) loo ogolaado inay shidaal ka baadhato Jubaland (onshore).
4) Waxaa kaloo intaa dheer in ay jirto inuu heshiis kula galay shirkaddaha Shell iyo BP inay shidaal ka baadhaan dhinaca badda ee Jubaland (offshore) . Heshiiskan waxaa aad uga shaqeeyey rag ingiriisa oo uu ka mid yahay MP. Tony Bouldry (xildhibaan)oo laga soo doorto Kent, ninkaasoo ka mid ah raga caanka ku ah inuu u ololeeyo kala goynta Soomaaliya.
5) Arrinta kale ee iyana dadka in yari fahamsantahay ayaa ah in Madaxweyne Culusoow iyo rag ay isku beel yihiin aamminsanyihiin inaanay suurto gal ahayn in Hawiye dhisankaro Maamul-goboleed ugaara oo ay tahay calaacashaasoo timo kasoo baxeen inay ku heshiiyaan oo isku afgartaan. Haddaba si arrintaa loo qariyo waa in Federaalkana la carqalaeeyaa Jubalanad-na lays hortaagaa Bay iyo Bakool iyo Shabeellada hosena la kala dhantaalaa. Sababtoo ah haddii Puntland Maamul samaystaan, Digil iyo Mirifna samaystaan Jubalandna samaysanto Soomaaliand-na samaysantay waxaa soo baxaya ceebta iyo foolxumada Hawiye oo adduunkoo dhammi ogaanayaa inay yihiin caqabadda hortaagan Soomaaliya.
Sawirkani waa Afhayeen Xaad oo Airport-ka kusoo dhoweynaya Xasan Culusoow
Intii Madaxweynuhu ku maqnaa Shirkii Afrika waxaa Xamar iyo degaannada ku dhowdhow ka dhacay waxyaalo badan oo ay ka midtahay Dagaalkii Shabaabku ku qaadeen duleedka Beledwyne ee ay ku laayeen ciidammadii Ethiopia ee aaggaa ujoogay inay Dawladda gacan ka siiyaan ladagaalanka argagixisada oo sidaad halkan ku aragtaan saanaddii lagasoo furtay lagusoo bandhigay Buuloburde.
Waxaa Xamar gudaheeda ka dhacay (Isgoyska Benaadir) dagaal ku dhexmaray laba maleeshiyo oo kawada tirsan ciidamada Xamar oo dad rayid ah waxna ku laayey waxna kudhaawacmeen, waxaa dagaal Shabaabku ku qaadeen aagga Garbahaarey, laba beelood ayaa degaanka Jowhar dagaal ku dhexmaray(halkan riix) gobolka Mudug waxaa lagu xasuuqay qoys dhan(Halkan dhugo), waxay shabaabku weerareen meel udhow xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Intaasoo dhib ah oo loo baahnaa in hadduu Xasan Madaxweyne qaran yahay inuu ka hadlo midna masoo qaadin waxaa keliya ee uu ka hadlay markuu soo noqday waxay ahayd arrinta Jubooyinka iyo maamulka Jubaland oo uu bartiisii kamiisay. Waxaa layaab leh xitaa inuu garan waayey inuu Kismaayaduu ku waashay ay Shabaabku madaafiic kusoo weerareen hadday lexojeclo ka hayso xitaa magaran waayey inuu xuso! Mise raalli baabu ka yahay in Shabaab Kismaayo dib uqabsadaan bal hadalkiisa nala dhegeysta http://saadaalnews.com/wp-content/uploads/2013/05/Xasan-Sheekh-oo-Muqdisho-kusoo-laabtay.mp3. Halkaa waxaad ka fahmaysaa in Madaxweynuhu khudbaddiisa oo ahayd 7 daqiiqo, 5 daqiiqo oo 7daa ka mid ah wuxuu ka hadlayey arrinta Kismaayo laba daqiiqona Afrika, meeyey waddankii dhammaa ee madaxda looga dhigay ee intii uu maqnaa ay ka dhaceen waxyaalahaan kor kusoo sheegnay iyo waxyaalo kaloo badani.
Gebagebadii Taleexmedia waxay ugu baaqaysaa ummada reer Jubaland guushii gacantiinayay ku jirtaaye xejista iskuna tashada caddaaladana ogaada oo ummadda Soomaaliyeed ee reer Jubaland ha usinnaadeen dhibta iyo dheefta Jubaland.
Haddaba akhriste dhowaan naga filo heshiisyadaa Xasan Culusoow la galay Dawladaha Qatar Turkiga iyo Ingiriiska oo caddaymohoodii wata.
Displaying 5 Comments Have Your Say maxamuud yusuf says:	June 2, 2013 at 10:34 am	marka hore waan idin salaamay bahda taleex marka xiga waxan aad ugu riyaaqay sida quruxda badan ee aad usoo bandhigteen siyaasada madaxwayne xasan culusow ee ku dhisan xiqdiga iyo xasadka iyo qabyaalada marka aniga fikirkaygu wuxuu yahay in aan marna la ogolaan waxyaaba hasoo fulaya villa somalia sababtoo ah waxa ka arimiya odayaal qabyaalad dilootay oo uu ugu horeeyo xasan xaad oo ah nin daaroodka aad uneceb belse waxba kama qaadi karo daarood waa qoomiyada ugu balaaran soomaaliya waxadna kagaran kartaa dhulka ay degaan waxayna degaan bariga afrika sida kenya itiibiya somaliya arinta kismaayo dadka dega jubbooyinku waa ay tashadeen waxayn disteen maamul dhamaystiran oo layiraahdo jubbaland marka waxba yuu ku tasbiixsan xasan culusow dalku waa federaal waxn kusoo koo bayaa jubbalnd &puntland hanoo laadeen culusow &xaad &tarsan &axmad diiriye hadheceen dhamaantood
Fainuus says:	May 30, 2013 at 3:08 am	We appreciate Dhulbahante, and we Ogaden recognize Dhulbahante as the most patriotic Somalis in Somalia, a true wadani, hands down. I know you guys are not standing on the side of justice and defending Jubbaland not because of Ogaden and what not, but, know that we appreciate your affort nonetheless and I thank you.
Liibaan Haldha says:	May 29, 2013 at 10:19 am	Dhibahante dadaal badnaa, oo hadel fiican, talaw ma waxay ka tahay isku cid ayaan nahay, mise waa kaalmo ka doon isku dhajin ah, maxaa Kismaayo talaw ka yaal, miyu Hargeysa la hadlo ama ka joogo
maxamud yusuf says:	June 2, 2013 at 10:46 am	liibaan afkaaga kadaa dhulbahante waa reer qiimo iyo qaayo badan ku leh dadka soomaaliuyeed gaar ahaan beesha daarood marka waxa kuu wanaagsan in aad afkaaga ka dhoorto anigu ma ahi dhulbahante balse waxan ka xumaaday aflagaadada aad ugaysatay haday ka hadlaan arima jubbaland sow kamid ma ahan dadka dega adiga yaa kugu yiri dhulbahante madego kismaayo anaga ayaa joogna oo ku saxayna waydegan wilaba waadadka ugu tayada badan marka laga hadlayo jilibka hartiga loo yaqaano marka sidaas lasoco oo yay markale kaa bariiqan leebaanow
Allpunttland.com » Xog hoose: Xasan Culusoow oo Kismaayo ka xaraashay Qatar, Turky iyo Ingiriis says:	May 29, 2013 at 8:18 am	[…] http://taleex.net/2013/05/28/xog-la-helay-xasan-culusoow-oo-kismaayo-ka-xaraashay-qatar-turky-iyo-in… […]